I izindiza ephephe kunayo yonke emhlabeni ziye umemezele ngasekuqaleni kukaJanuwari. Independent asihlole inhlangano Airlineratings, okwenza isilinganiso, wawuqondiswa idatha wombuso emizimbeni zezindiza, ukuhlolwa ahlukahlukene, uphenyo, amarekhodi nokufa. I rankings wakucabangela ezingeni zezindiza, okuyinto zitholakala esisekelweni izindiza, induduzo izindiza zabo futhi kaningi kangakanani olusha izindiza epaki. 407 abathwali iqhaza kulolu cwaningo. Uyini nephephile yezindiza kuleli zwe? Funda ngakho esihlokweni.
Lokhu yenethiwekhi temabhodlela uhlu izindiza ephephe kunayo yonke emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, kuyinto inhlangano enkulu kunazo zonke e-Australia. Isinqe salo itholakala eSydney. Inkampani yezindiza uye wathola isicoco kakhulu yenethiwekhi evikelekile, njengoba esikhathini esidlule eminyakeni engu-60 ayikho izindiza zayo abakutholanga bese kuba nengozi. Phakathi neMpi Yezwe II, eziningi izindiza namanje kuhlulekile, (ebulala abantu ababalelwa 63). Kamuva, kwakukhona izingozi ezimbili izisulu, owokugcina owenzeka ngo-1951. inkampani Fleet njalo olusha. I izindiza endala iminyaka 9 kuphela ubudala.
Indlunkulu esiphathiswa itholakala emaphethelweni edolobha-Seattle Siteki. Le nkampani yasungulwa ngo-1932. Kuwo wonke umlando walo izikhathi 4 kuphela ngemikhumbi yakhona awela le ngozi. Alaska Airlines ngoxhaxha izindiza 112, obuhlanganisa izinkomba ezintathu. Ngezinye zezindiza Portland futhi Los Angeles kukhona ihabhu ezimbili ezengeziwe. Skytrax British ejensi babelwe Alaska Airlines izinkanyezi ezintathu.
Amasevisi we-yenethiwekhi emoyeni ukuthi ubusebenzisa i-iminyaka engu-70. Le nkampani yasungulwa ngo-1940. Ngokuhamba kwesikhathi esithile, lapho esebenza khona izindiza ezivela New Zealand kuphela e-Australia. Ngo-1965, le nkampani wathola igama ngaphansi kulo namuhla eyaziwa.
Izisekelo esemqoka ye inkampani zezindiza Oakland futhi Los Angeles. I engavamile itholakala lokuthi ukuthi uyazifeza izindiza kuphela emakethe emhlabeni wonke.
Ukunakekela induduzo lula amakhasimende ayo, inkampani njalo ithuthukisa futhi kuthuthukisa isevisi Shuttle, ukuhlinzeka indlela esheshayo kanye nemizila kakhulu. Futhi ezingeni ehloniphekile futhi lithembekile izindiza.
Le nkampani usebenza izindiza eziya 27 izindawo kuphela New Zealand kanye 26 imigqa yangaphandle. Air imikhumbi siqukethe 50 izindiza yesimanje, okuncike "Boeing" futhi "Eirbasy".
Zonke Nippon Airlines (Japan)
Kumila eyinhloko itholakala ku inhloko-dolobha yaseJapane. Zonke Nippon Airlines lifaka yesibili phakathi izindiza ngobukhulu kuleli zwe. I lunye eyinhloko esiphathiswa izindiza yasekhaya. Futhi kwenziwe kanye nemizila uya khona emhlabeni jikelele. Ngaphansi kokulawula yayo kuyinto AJV wezimpahla yezindiza. Aircraft travel phakathi emadolobheni 49 eJapane.
izindiza eziya emadolobheni 22 kwamanye amazwe nazo kukhiqizwa.
Ekuqaleni, Zonke Nippon Airlines kwenziwe kuphela Helicopter zokuthutha, kodwa ngemva konyaka nkampani yavula nomgibeli izindiza ezivela Osaka eTokyo.
Fleet AmananiBUDGET_NAME 204 izindiza. Le nkampani futhi inikeza amakhasimende ayo iqhaza ku uhlelo ukwethembeka emva indiza yokuqala.
EMpumalanga, esiphathiswa ingenye ngobukhulu. Base-ke itholakala sezindiza of Hong Kong. Cathay Pacific Airways inenethiwekhi umzila omkhulu, esehlanganise hhayi kuphela emazweni aseMpumalanga, kodwa e-United States, e-Australia, eRussia, e-Europe nase-Asia. Inkampani yezindiza enza umgibeli nje kuphela kodwa futhi nempahla ezindaweni ezingaphezu kuka-100 emhlabeni wonke. Air imikhumbi manje yakhiwa 97 izindiza.
Of Cathay Pacific Airways kuyingxenye omunye yezindiza ezintathu imifelandawonye esikhulu kunazo zonke emhlabeni - OneWorld. Wonke amalungu Alliance ukwabelana Ngentengo ukwethembeka izinhlelo ezifanayo. Consulting Inkampani Skytrax nkampani ithe lokhu izinkanyezi ezinhlanu.
Isebenza izindawo 70 emazweni angu-40. Inkampani yenethiwekhi emoyeni ubhekwa umholi izinga lenkonzo. Ukuthembeka, umthwalo ukuhlolisisa - izici ehlukile ye inkampani. Fleet siqukethe 90 izindiza yesimanje, ogxile "Airbus".
Ngenhla kwasho izindiza ephephe kunayo yonke emhlabeni. Abanye futhi esiphawulekayo. Ngaphezu kwalezi yezinkampani, ohlwini izindiza ephephe kunayo yonke emhlabeni zazihlanganisa Lufthansa (eJalimane), American Airlines (USA), Lufthansa (USA), Emirates (UAE), Etihad Airways (UAE), Japan Airlines (Japan), KLM (Netherlands) SAS (Sweden-Norway-Denmark), Hawaii Airlines (USA), Virgin Atlantic (UK), Singapore Airlines (Singapore), Virgin Australia (e-Australia), Swiss (Switzerland), EVA emoyeni (China). Kodwa akugcini lapho.
I izindiza nephephile zomhlaba phakathi abathwali eziphansi - Flybe (United Kingdom), Jetstar (e-Australia), HK Express (China), by Thomas Cook (UK), Virgin Melika (USA), Tui Fly (Germany).
Ngokusho Airlineratings, 2015 sekube 16 emoyeni ukuphahlazeka okwaholela ekufeni kwabantu 560.
Inhlekelele enkulu okuthiwa ngokuwa Airbus-321 ka "Kogalymavia" (wafa 224). Lapho ewa Airbus-320 Germanwings abashonile kubantu abangu-150.
I izindiza ephephe kunayo yonke emhlabeni uhlela ukuqhubeka ukuthobela isimo esinjalo ohloniphekile.
Onur Air: Airline Izibuyekezo
Airline "Katekavia": abahambi Izibuyekezo
Zwi amaningi adumile uWinston Churchill intando yeningi kanye nezombusazwe
Hotel La Vella Ihhotela 3 * (Alanya, Turkey): incazelo, ezokungcebeleka kanye nokubuyekeza
Hhayi ninalo ucingo - yini okumele ngiyenze?
Indlela oda isu elikhethekile.
Indlela yokukopisha umbhalo usebenzisa ikhibhodi kuma-Windows operating systems
Kubuyekeziwe "Chevrolet-Niva": incazelo nesithombe. "Chevrolet-Niva" 2015: yini entsha?